Dhaamsa Gabaabduu Uummata Oromoo Hundaaf. | QEERROO
2. Manguddootni ulfoon biyyaa, Dubartootni ulfaafi Daa’imman naannoo jireenyaa keessaan irraa fagaattanii daandii dheeraa geejjibaanis haa ta’uu haala fedhee kamiin iyyuu hin deemina, of eeggannoo godha!!
3. Barattootni dhaabbilee barnoota olaanoo hanga sadarkaa 1ffaatti jirtan bakkuma jirtanitti of eeggannoo guddaa godha, sochii warraaqsa FXG fi diddaa kamuu Qabsoo Bilisummaa Oromoo galiin gahuuf godhamuu keessatti bilchinaafi hubannoo amma qabdan caalatti jabeessuufi dabaluun cinatti haala uumamu kamiifuu of eeggannoon socho’uun murteessadha!!
4. Qeerroon dargaggootni Oromoo sochii FXG irraa qooda fudhachaa jirtaniifi uummataaf dargaggoota Oromoo qooda fudhachiisa jirtan wayita sochiin godhamu konkolaataa fe’isaafi geejjiba kamuu wal guuranii yaabbachuun gaaga’ama lubbuu waan fiduuf of eeggannoo guddaa godha. Kanneen akka akkas gootan isin kakaasan lakkii gaaga’ama lubbuu qaba dhiisii jedhaa sochii keessaa moggaatti baasaa gorsa!!
5. Bulchitootni Caasaa Mootummaa Wayyaanee OPDO keessatti sadarkaa gidduugaleessa hanga Aanaafi gandaatti argamtan supha mootummaa ( Haaromsa gadi fagoo) jettan dhiisa. Sirna EPRDF Oromoo moggaatti baasee duula duguuginsa sanyii gaggeessa jiru keessatti haaromsi godhamu kamuu uummata Oromoof Bilisummaafi Walabummaa kabachiisuuf kan akeeke waan hin taaneef, yeroo kanatti humna qabdaniifi waan dandeessaniin gara Qabsoo Bilisummaa Oromoofi uummata Oromoo cina dhaabbachuu irratti xiyyeeffadha!!
6. Ilmaan Oromoo hojjettootni Mootummaa sadarkaa garaagaraa irraatti argamtaan karooraafi tarsiimoo mootummaan wayyaanee aangoorra of tursuuf kallattii hundaan fayyaadamuuf tajajiltuu taatanii hin dalagiina. Sadarkaa jirtan hundarratti hojii isinitti kennamu kufaa taasisuun uummata Oromoo duguuggaan sanyii irratti gaggeeffamaa jiru cina dhaabbadha!!
7. Yakki Waraanaa Oromiyaa Bahaa, Kibbaa fi Kibba Bahaan itti fufinsaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jira, Oromoon akka uummataattis, akka Jaarmiyaalee Siyaasaafi Jaarmiyaalee hawwaasummaatis haariiroo wal utubbiifi tokkummaa jabeeffachuun mootummaa halkanii guyyaa dhiiga uummata keenyaa dhangalaasaa jiru aangoo irraa darbuu irratti waloon akka hojjetamuu dhaamsa keenya gadi jabeessinee dabarsina!!.
8. Oromoon akka waliigalatti Qabsoo hidhannoo jabeeffachuuf kanneen hidhannoo qaban waan barbaachisuufi dandahamuu hundaan jabeessuufi bira dhaabbachuun, kanneen diinni hidhannoo irraa hiikkachuu barbaadu akka hin hiikkaanneef tumsa barbaachisuu gochuun caalatti hidhachuufi hidhachiisuun diina keessaafi duubaan yakka waraana duguuggaa sanyii nurratti gaggeessuu of irraa qolachuun Bilisummaa saba keenyaafi Walabummaa biyyaa keenyaa gonfachuuf waloon Qabsootti haa jabaatnu jechuun irraa deebinee dhaamsa keenya dabarsina!!
2 thoughts on “Dhaamsa Gabaabduu Uummata Oromoo Hundaaf.”
Pingback: Dhaamsa Gabaabduu Uummata Oromoo Hundaaf.
Pingback: Dhaamsa Gabaabduu Uummata Oromoo Hundaaf. -